Privacy / Shuruudaha isticmaalka |
Home » Privacy / Shuruudaha isticmaalka
The shuruudaha iyo xaaladaha soo socda adeegsiga dhan of website coronationcasino.com iyo content oo dhan, adeegyada iyo waxyaabaha laga heli karo ama website-ka (wada qaaday, Website ka). Website waxaa iska leh oo ku shaqeeya by dabaaldega Casino - GlobaliGaming (& Quot; dabaaldega Casino & quot;). Website waxaa ku bixiyeen ku xiran laydiinka aqbalo oo aan ka beddelid oo dhan oo ka mid ah shuruudaha iyo xaaladaha sidan ku jira iyo xeerarka kale ee hawlgalka oo dhan, siyaasadaha (lugu daro, xad la'aan, Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah dabaaldega Casino ee) iyo nidaamka oo la daabacay waxaa laga yaabaa in waqti ka waqti on Site this by dabaaldega Casino (si wadajir ah, ka & quot; Heshiiska & quot;).
Fadlan akhri heshiiskan si taxadar leh ka hor inta helitaanka ama isticmaalaya Website ka. By helitaanka ama isticmaalaya qayb ka mid ah web site ka, aad ogolaato inaad noqon xidhxidhan by shuruudaha iyo xaaladaha heshiiska this. Haddii aadan ku heshiiyaan in ay dhammaan shuruudaha iyo xaaladaha heshiiska this, ka dibna waxaa laga yaabaa in aadan heli Website ama isticmaal adeegyada wax. Haddii kuwan shuruudaha iyo xaaladaha waxaa loo tixgeliyaa dalab by dabaaldega Casino, aqbalaada waxaa cad ku koobnayn shuruudahan. Website waxaa laga heli karaa oo kaliya in ay dadka ugu yaraan jira 18 sano jir ah.
Account Your coronationcasino.com iyo Site. Haddii aad la abuuro a blog / site on Website ka, waxaad masuul ka tahay ilaalinta ammaanka ee xisaabtaada iyo blog, oo aad si buuxda masuul ka ah dhammaan hawlaha ka dhaca ka yar xisaabta iyo wixii tallaabooyin kale oo loo qaaday oo xidhiidh la leh blog waa. Waa in aadan ku tilmaami ama u yeelaan keywords aad blog hab marin habaabin ah ama sharci darro ah, ay ka mid yihiin hab loogu talagalay in ay ku ganacsan on magaca ama sumcadda dadka kale, iyo dabaaldega Casino laga yaabaa in la beddelo ama ka saar sharaxaad kasta ama keyword in ay tixgeliso aan habboonayn ama sharci darro ah, ama haddii kale ay u badan tahay in ay keeni deyn dabaaldega Casino. Waa in aad isla markiiba wargelin dabaaldega Casino kasta oo isticmaalada la fasaxin ee aad blog, xisaabtaada ama wax jajaban kale ee ammaanka. Dabaaldega Casino masuul ka ah wax kasta oo falalka ama laga tegay Waxaad by ma noqon doonto, oo ay ku jiraan waxyeelo ka mid ah nooc kasta oo ay galeen oo sabab u ah falalka caynkaas ah ama laga tegay.
Masuuliyadda Kudarsadayaasha. Haddii aad ku shaqeeyaan blog a, comment on blog a, boostada maaddi ah Website ka, links post on Website ka, ama haddii kale ka dhigi (ama u oggolaadaan xisbiga kasta oo saddexaad si ay u sameeyaan) wax la heli karo iyada oo ah Website ka (wax kasta oo kale, & Quot; Content & quot;), Waxaad gebi ahaanba masuul ka ah content ee waa, iyo dhibaato kasta oo ka dhasha, Content in. Taasi waa kiiska loo eegin in Content ee su'aasha ka dhigan qoraalka, muuqaallo kale, file maqal ah, ama software computer. By samaynta Content heli karaa, aad wakiil iyo ballanqaadayso in:
dajinta, koobiyeynta iyo isticmaalka Content ee aan ku xadgudbin doono xuquuqda lahaansho, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn copyright ah, patent, summad ama ganacsiga xuquuqda qarsoon, xisbiga kasta oo saddexaad;
haddii loo-shaqeeyahaagu uu leeyahay xuquuqda hantida aqooneed ee aad la abuuro, aad sidoo kale leedahay (i) ogolaansho ka helay aad u shaqayso in boostada ama ka dhigi laga heli karaa Content ee, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn software kasta, ama (ii) ka loo-shaqeeyahaaga xaqiijisatay cafinta sidii dhammaan xuquuqda ama in Content ee;
aad si buuxda u raacay wax ruqsad dhinac saddexaad la xiriira Content ee, iyo sidaan u sameeyey waxyaalahaas oo dhan lagama maarmaan ah in si guul ah dhex mari si loo soo afjaro users kasta oo shuruudaha looga baahan yahay;
Content ah kuma jirto ama rakibi fayrusyada kasta, Gooryaanka, furin, fardo qoriga ama content kale waxyeello ama burbur;
Content ee ma aha spam, ma aha makiinad- ama aan kala sooc lahayn ahbaa-, iyo kuma jirto akhlaaq daro ama la rabin content ganacsi loogu talagalay in la wado gaadiidka meelaha dhinac saddexaad ama kor qiimeynta search engine of sites xisbiga saddexaad, ama in ay sii falal sharci darro ah (sida phishing) ama marin habaabiyaan dadka qaata sida ay u il mid ah waxyaabaha la (sida buufinta);
Content ee ma aha qaawan, kuma jiraan hanjabaad ama kicin rabshad shakhsiyaadka ama hay'adaha, oo uusan xad-gaarka ah ama sumcad xuquuqda xisbiga kasta oo saddexaad;
aad blog aan is xayaysiiyo via fariimaha elektarooniga ah la rabin sida links spam on Newsgruubyo, liisaska email, blogs kale iyo goobaha internetka, iyo hababka xayaysiis Ayadoo la mid ah;
aad blog aan la magacaabay si waafaqsan in baadiyeeyaa akhristayaasha aad galay fikir in aad tahay qof kale ama shirkad. Tusaale ahaan, URL aad blog ama magaca ma aha magaca qof kale oo aad naftaada ama shirkad kale oo aan ahayn adiga kuu gaar ah ka badan; iyo
aad leedahay, in ay dhacdo of Content oo ay ku jiraan code computer, si sax ah u kala saaraa iyo / ama ku tilmaamay nooca, dabeecadda, isticmaalaa iyo saamaynta qalabka, haddii codsaday in sidaas la sameeyo by dabaaldega Casino ama haddii kale.
By gudbisatay Content in dabaaldega Casino loogu daro on your Website, idin siin dabaaldega Casino ah adduunka oo idil, boqortooyada-free, iyo liisan aan gaar u soo saari, beddelo, la qabsadaan, oo naadiya Content ah oo keliya, waayo, ujeedada bandhigeen, qaybinta iyo kor u qaadida aad blog. Haddii aad tirtirto Content, Dabaaldega Casino isticmaali doonaa dadaal macquul ah si ay u ka Website saaro, laakiin inaad sii garan caching ama tixraacyo Content waxaa laga yaabaa in aan loo sameeyey si degdeg ah u aheyn.
Iyadoo aan la xadidayn mid ka mid ah Wakiilada ama fasaxyada kuwa, Dabaaldega Casino wuxuu xaq u leeyahay (in kastoo aan waajib ku ah) in, in lasameeyay kaliya dabaaldega Casino ee (i) diidaan ama ka saar content kasta oo, in opinion macquul dabaaldega Casino ee, xadgudub ku ah nidaamka wax dabaaldega Casino ama waa in si kasta oo waxyeello ama objectionable, ama (ii) joojin ama diidi helitaanka iyo isticmaalka website-ka si ay qof kasta ama hay'ad sabab kasta, in lasameeyay kaliya dabaaldega Casino ee. Dabaaldega Casino yeelan doontaa waajib kuma aha in ay bixiyaan lacag kasta oo xaddi hore bixisay.
Payment iyo Renewal.
By xulashada shey ama adeeg, aad ogolaato inaad bixiso dabaaldega Casino ee hal mar ah iyo / ama lacagta Times bil kasta ama sanadle ah lagu tilmaamay (shuruudaha lacag bixinta oo dheeraad ah lagu dari laga yaabaa in isgaarsiinta kale). lacagta rukun lagu soo oogi doonaa ku salaysan pre-pay maalinta a aad saxiixdo Jidiidin ah oo dabooli doona isticmaalka adeegga in muddo Times bil kasta ama sanadle ah sida ka muuqata. Lacagta ma aha celinayn.
Haddii aad sheegto dabaaldega Casino ka hor dhamaadka muddada Times ay khuseyso in aad rabto in aad kansasho Times a, aad xidhid si toos ah u cusbooneysiin doonin oo aad noo oggolaanayaa in la ururiyo Lacagtaas ka dibna-dabaqi sannadlaha ah ama bil Times sida (iyo sidoo kale canshuurta kasta) iyadoo la isticmaalayo credit card ama hab kale oo lacag bixinta waxaan leenahay on rikoor aad u. Casriyaynta la tirtiri karaa wakhti kasta adigoo soo gudbinaya codsigaaga in dabaaldega Casino qoraal.
Kharashka; Payment. By saxiixin Adeegyada a xisaabtiisu aad ogolaato inaad bixiso dabaaldega Casino lacagta Mudanayaasha lagu dabaqi karo iyo lacagta soo noqnoqda. lacagta Khusayso Kharashkan doonaa laga bilaabo maalinta adeegyada aad ku hagaagaan oo ka hor isticmaalaya adeegyada sida. Dabaaldega Casino xaq u leedahay inay bedesho shuruudaha lacag bixinta iyo lacagta dul soddon (30) maalmood ka hor ogaysiis qoran in aad. Adeegyada la tirtiri karaa in aad by at mar walba on soddon (30) maalmood ogeysiis qoraal ah dabaaldega Casino.
Taageerada. Haddii aad adeeg ka mid ah helitaanka taageero email mudnaanta. & Quot; taageero Email" macnaheedu waa awoodda in la sameeyo codsi kaalmo taageero farsamo by email waqti kasta (iyadoo dadaal macquul ah by dabaaldega Casino in ay ka jawaabaan hal maalin shaqo gudahood) ku saabsan isticmaalka Adeegyada VIP ah. & Quot; Mudnaanta" ka dhigan tahay in taageero qaadataa mudnaan badan taageerada ay u hayaan dadka isticmaala ee heerka ama adeegyada coronationcasino.com free. taageero Dhamaan waxaa la siin doonaa iyada oo la raacayo dabaaldega Casino adeegyada caadiga ah dhaqanka, nidaamyada iyo siyaasadaha.
Masuuliyadda Website Visitors. Dabaaldega Casino ayaa dib u eegis, oo aan dib u eegi karaan, oo dhan ah waxyaabaha la, oo ay ku jiraan software computer, posted in Website ka, oo sidaas daraaddeed ayaa mas'uul ka ah content wax in ee ma noqon karaan, isticmaalaan ama saamaynta. By ka hawlgala Website ka, Dabaaldega Casino ma matali karto ama tusinayaan in ay ansaxisay in maaddadu ay halkaas posted, ama in ay aaminsan in wax caynkaas ah in ay noqon sax ah, waxtar leh ama aan waxyeello. Waxaad mas'uul ka tahay qaadista tallaabooyin taxaddar ah sida lagama maarmaan ah in aad naftaada iyo nidaamyada computer ka fayrusyada ilaaliyo, Gooryaanka, fardo qoriga, iyo content kale waxyeello ama burbur. Website waxa ku jiri laga yaabaa content in uu yahay weerar, foolxun, ama haddii kale objectionable, iyo sidoo kale content ku jirto qalad farsamo, qaladaad typographical, iyo khaladaadka kale. Website ayaa sidoo kale ku jiri kara wax ku xadgudba xuquuqda gaarka ah ama sumcad, ama xad gudbo hantida aqooneed iyo xuquuqda kale lahaansho, ee labada dhinac saddexaad, ama dajinta, koobiyeynta ama isticmaalka taas oo ku xiran shuruudaha iyo xaaladaha dheeraad ah, sheegay ama la qeexin. Dabaaldega Casino afeefanaysaa masuuliyad kasta oo dhibaato kasta oo ka dhasha isticmaalka by martida ee Website ka, ama ka dajinta kasta oo ay kuwa soo booqda of content waxaa posted.
Content Posted on Shabakadaha Kale. Waxaan aan dib u eegis, oo aan dib u eegi karaan, oo dhan ah waxyaabaha la, oo ay ku jiraan software computer, sameeyey laga heli karaa internetka iyo shabakadaha kaas oo coronationcasino.com links, iyo that link to coronationcasino.com. Dabaaldega Casino ma qabto wax gacanta kuwa websites non-dabaaldega Casino iyo boggagiisa, oo masuul ka ah waxyaabaha ku jira ama ay u isticmaalaan ma aha. By la xiriirinaya in website a non-dabaaldega Casino ama webpage, Dabaaldega Casino ma matali karto ama tusinayaan in ay ansaxisay website ama webpage. Waxaad mas'uul ka tahay qaadista tallaabooyin taxaddar ah sida lagama maarmaan ah in aad naftaada iyo nidaamyada computer ka fayrusyada ilaaliyo, Gooryaanka, fardo qoriga, iyo content kale waxyeello ama burbur. Dabaaldega Casino afeefanaysaa masuuliyad kasta oo dhibaato kasta oo ka dhasha isticmaalka non-dabaaldega websites Casino iyo boggagiisa.
Jebitaanka Copyright iyo Siyaasadda DMCA. Sida dabaaldega Casino weydiiyo dadka kale in ay ixtiraamaan xuquuqda ay hantida aqooneed, waxaa ixtiraama xuquuqda hantida aqooneed ee dadka kale. Haddii aad aaminsan tahay wax in yaal ama ku xiran by coronationcasino.com xadgudba aad copyright, aad waxaa lagu dhiirigelinayaa inay sheegto dabaaldega Casino waafaqsan Xeerka Digital Millennium Copyright dabaaldega Casino ee (& Quot; DMCA & quot;) Siyaasadda. Dabaaldega Casino u jawaabi doonaan oo dhan ogeysiisyada sida, ay ka mid yihiin sidii loo baahan yahay ama ku haboon iyadoo la fogeynayo wax khatar ama naafada dhan links in maaddadu ay khatar. Dabaaldega Casino joojin doonaa helitaanka booqdaha ah iyo isticmaalka website-ka haddii, xaalad ku haboon, booqdaha waxaa ka go'an in ay noqon infringer celis ah xuquuqda daabacaada ama xuquuqaha kale hantida aqooneed ee dabaaldega Casino ama kuwa kale a. In the case of joojinta sida, Dabaaldega Casino yeelan doontaa waajib kuma aha in ay bixiyaan lacag kasta oo xaddi hore bixisay in dabaaldega Casino.
Hantida aqooneed. Heshiiskani waxa aanu ku wareejin ka dabaaldega Casino inaad wax dabaaldega Casino ama cid saddexaad hantida aqooneed, iyo xaq oo dhan, horyaalka iyo xiisaha iyo in hantida sida sii joogi doonaan (sida dhexeeya dhinacyada) keliya la dabaaldega Casino. dabaaldega Casino, coronationcasino.com, logo coronationcasino.com ah, iyo dhammaan alaabooyinka kale, marks adeegga, naqshadeynta iyo logos isticmaalo oo xidhiidh la leh coronationcasino.com, ama Website yihiin alaabooyinka ama alaabooyinka ka diiwaan gashan ee dabaaldega Casino ama fasaxa siisay dabaaldega Casino ee. alaabooyinka kale, marks adeegga, naqshadeynta iyo logos isticmaalo oo xidhiidh la leh Website waxaa laga yaabaa in ee alaabooyinka ka mid ah dhinacyada kale ee saddexaad. Your isticmaalka Website aad siiso lahayn midig ama liisanka soo saari ama haddii kale isticmaalin wax dabaaldega Casino ama alaabooyinka dhinac saddexaad.
Xayaysiis. Dabaaldega Casino xaq u leedahay inay muujiyaan xayeysiis on your blog haddii aad soo iibsatay account ad-free ah.
Astaan. Dabaaldega Casino xaq u leedahay inay muujiyaan links dhaca sida 'Blog at coronationcasino.com,'Qoraaga theme, iyo dhaca font ee footer blog ama toolbar.
Partner Products. By kaakicin saarka lammaane (e.g. theme) mid ka mid ah la-hawlgalayaasha our, aad ogolaato inaad lamaanahaaga in ay la eego adeegga. Waxaad dooran kartaa ka mid ah marka la eego adeega ay waqti kasta by de-kaakicin saarka rafiiqa.
Domain Names. Haddii aad diiwaan magac domain ah, isticmaalaya ama wareejinta magac domain hore ka diiwaan gashan, inaad sii garan oo ku heshiin isticmaalo in magaca domain ayaa sidoo kale ku xiran yahay siyaasadaha of Corporation Internet-ka ee Magacyada Hawsha iyo Lambaro (& Quot; ICANN & quot;), oo ay ku jiraan ay Xuquuqda iyo waajibaadka Diiwaangelinta.
Isbedelada. Dabaaldega Casino xaq u, at ikhtiyaarka kaliya, inuu wax ka beddelo ama lagu badalo qayb ka mid ah heshiiskan. Waa masuuliyadaada si loo hubiyo heshiiskan xilliyo isbedelada. Your isticmaalka sii of ama helitaanka Website soo socda dhajiyay isbedel kasta oo heshiiska u metelo ogoshahay isbedel kuwa. Dabaaldega Casino ayaa sidoo kale laga yaabaa in, mustaqbalka, bixiyaan adeegyo cusub iyo / ama muuqaalada iyada oo Website ah (lugu daro, sii daayo of qalab cusub iyo khayraadka). muuqaalada iyo / ama adeegyo cusub noocan oo kale ah waxay noqon doonaan ku xiran shuruudaha iyo xaaladaha heshiiskan.
Joojinta. Dabaaldega Casino laga yaabaa inuu joojiyo aad u helaan dhammaan ama qayb ka mid ah Website wakhti kasta, ama sababla'aan, leh ama aan lahayn ogeysiis, wax ku ool ah si deg deg ah. Haddii aad doonayso inaad joojiso heshiiska ama this account coronationcasino.com aad (haddii aad leedahay mid ka mid ah), aad si fudud u joojin laga yaabaa in la isticmaalayo Website ka. Habase yeeshee qorani, haddii aad leedahay a account adeegyada bixisay, account sida la waayi karaa oo keliya by dabaaldega Casino haddii aad jebiso huba Heshiiskan oo ay ku guuldareysato inay daaweeyo jebinta sida gudahood soddon (30) maalmood ka dabaaldega Casino ee ogeysiis inaad isku waslad; ay shardi tahay in, Dabaaldega Casino joojin kartaa Website si degdeg ah oo qayb ka ah xidhan guud hoos of adeegeena. All qodobada heshiiskan oo ay dabeecadda waa in ay u noolaadaan joojinta noolaan doonaan joojinta, lugu daro, xad la'aan, qodobada lahaanshaha, afeef warranty, qaansiin iyo xadka ka deyn.
Afeef of damaanad. Website ayaa waxaa la siiyaa & quot; sida waa & quot;. Dabaaldega Casino iyo alaab iyo fasaxa siisay ay halkan iska riixo oo dhan damaanad nooc kasta, muujiyaan ama maldahan, lugu daro, xad la'aan, waxay damaanad merchantability, taam ujeeddo gaar ah iyo non-jebinta. Midkoodna dabaaldega Casino midna loogu siisay, ka dhigaysa damaanad kasta oo Website wuxuu kuu ahaan doonaa baadi lacag la'aan ah ama helaan in ku darina noqon doontaa joogto ah kala go 'ama. Waxaad fahamsantahay in aad ka soo dejisan, ama haddii kale heli content ama adeegyada, Website ee aad ikhtiyaar u gaar ah oo halis.
Xadidaadda mas'uuliyadda. Haddii ay dhacdo lahayn Doono dabaaldega Casino, ama qeybiyeyaasha ama fasaxa siisay ay, noqon qabsan marka la eego wax mowduuca heshiiskan hoos wax heshiis ah, dayacaad, mas'uuliyad adag ama aragti kale oo sharci ah ama si siman loogu talagalay: (i) wax kasta oo gaar ah, magdhow shil ah ama natiijo; (ii) kharashka iibsiga alaabooyinka ama adeegyada bedel; (iii) waayo, kala go 'isticmaalka ama khasaaraha ama musuqmaasuq xogta; ama (iv) waayo xaddi kasta oo ka badan lacagta ka bixisay aad by si dabaaldega Casino hoos heshiiskan laba iyo toban ah lagu jiro (12) muddo bil ka hor sababta oo ah tallaabo. Dabaaldega Casino ma ay heli doonaan deyn-gaabin kasta ama dib u dhac ay sabab u tahay arrimaha ay ka baxsan gacanta ku macquul ah. qorani waa looma adeegsan karo heerka uu mamnuucayo sharcigu dabaqi.
Matalaada Guud iyo damaanad. Waxaad wakiil iyo ballanqaadayso in (i) isticmaalka Website wuxuu kuu ahaan doonaa si waafaqsan adag la Siyaasadda Privacy dabaaldega Casino, iyadoo heshiiskan iyo dhamaan sharciyada iyo xeerarka (oo ay ku jiraan xad la'aan kasta oo sharciyada maxalliga ah ama xeerarka ee dalka, gobolka, magaalada, ama meelaha kale ee dawliga ah, ku saabsan akhlaaqda online iyo content la aqbali karo, oo ay ka mid yihiin dhammaan sharciyada lagu dabaqi karo ee ku saabsan gudbinta xogta farsamada ka Maraykanka ama wadan, taas oo aad degan tahay dhoofiyo) iyo (ii) isticmaalka Website ka aan ku xadgudbin doono ama Khayaamina xuquuqda hantida aqooneed ee xisbiga kasta oo saddexaad.
Beriyeelaynta. Waxaad ogolaatay in indemnify iyo hay dhib lahayn dabaaldega Casino, qandaraaslayaasha ay, iyo fasaxa siisay ay, iyo agaasimayaasha ay ka soo jeedaan, sarkaal, shaqaalaha iyo wakiilada ka gees ah iyo wixii oo dhan sheegashada iyo kharashyada, oo ay ku jiraan lacagta qareenka ', soo shaac baxa isticmaalka Website ka, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn aad xad gudub ku ah heshiiskan.
Kaladuwan. Heshiiskani waxa uu ka dhigan heshiiska oo dhan ka dhexeeya dabaaldega Casino oo idinku saabsan mowduuca warkaasu, oo ay kaliya waa la bedeli karaa iyadoo wax ka beddelka qoraal ay saxiixeen fulinta idman ee dabaaldega Casino, ama by dhajiyay by dabaaldega Casino of version a dib. Marka laga reebo in ay sharciga ilaa xad lagu dabaqi karo ee, haddii ay jiraan, waxay bixisaa haddii kale, heshiiskan, wax kasta oo ay helaan ama isticmaalka Website la maamuli doonaa by qaynuunnada reer England iyo Wales, marka laga reebo khilaafka qodobada sharciga ay, iyo madasha ku habboon ee wax khilaaf soo shaac baxa ama la xiriira mid ka mid ah la mid ah uu noqon doono gobolka iyo maxkamadaha federaalka oo ku yaalla London, UK. Marka laga reebo sheegashada gargaarka injunctive ama siman ama sheegasho ku saabsan xuquuqda hantida aqooneed (taas oo la keeni karaa maxkamad kasta oo karti leh oo aan dhajiyay curaarta ah), muran kasta oo sababo hoos heshiiskan, waa in ugu dambeyntii gar gooyn doonaa si waafaqsan Xalinta Comprehensive Rules of Xalinta Khilaafaadka Garsoorka iyo Adeegga Dhexdhexaadinta, Inc. (& Quot; saxmadda & quot;) by saddex garqaadeyaasha magacaabay si waafaqsan Xeerarka sida. heshiisiin qaadan doonaan meel London UK, ee luqadda Ingiriisiga iyo go'aanka Garqaad lagu dhaqan karaa maxkamad kasta oo. Xisbiga jirta in talaabo ah ama dacwada si ay u xoojiyaan heshiiskan waa in la xaq u leedahay in kharashka iyo lacagta qareenka '. Haddii qayb ka mid ah heshiiskan la qabtaa jabeen ama sharuucda, qayb noqon doonaan si ay u muujiyaan ujeedada asalka ah dhinacyada ', iyo qaybaha haray sii joogi doonaa xoog buuxda iyo saamayn. dhaafitaanka A by labada dhinac ee xilli kasta ama xaalad heshiiskan ama wax jebinta oo dhanba, in kasta oo ka mid ah tusaale ahaan, ma ka tanaasulaan doonaa dheer sida ama xaalad ama jebinta wax ku xiga oo dhanba. Waxaad siin kartaa xuquuqda aad ku hoos heshiiskan in dhinac kasta oo raalli ka yahay inuu, oo Ogolaaday in lagu xidho by, shuruudaha iyo xaaladaha ay; Dabaaldega Casino laga yaabaa in u yeelaan xuquuqda ay hoos Heshiiskan oo aan xaalad. Heshiiskani waxa la qabanaya doonaa oo inure doonaan inay faa'iido u ah dhinacyada, hadha ay wareejiyaa ogol yahay.
dabaaldega Casino - GlobaliGaming ("dabaaldega Casino& Quot;) shaqadiisu ay coronationcasino.com iyo shaqeeyaan laga yaabaa in websites kale. Waa siyaasadda dabaaldega Casino ee ay ixtiraamaan asturnaanta ku saabsan macluumaad kasta oo laga yaabaa in aan u ururiyaan inta ka hawlgala websaydyada.
Sida ugu hawlwadeenada website, Dabaaldega Casino ururiya aan dawliga ahayn shakhsi-aqoonsashada macluumaad of sort in daalacashada web server iyo sida caadiga ah ka dhigi laga heli karaa, sida nooca browser, doorashada luqada, jeeday goobta, iyo taariikhda iyo waqtiga codsiga kasta booqdaha. Ujeedada dabaaldega Casino ee ururinta macluumaadka garashada-shakhsi aan waa inay si fiican u fahmaan sida martida dabaaldega Casino ayaa isticmaali ay website. Muddo markii la joogaba, Dabaaldega Casino laga yaabaa in ay sii daayaan-shakhsi-aqoonsashada aan macluumaadka ku wadar ahaan labada lug ku, tus, iyagoo soo daabacay warbixin ku saabsan isbeddellada in isticmaalka ee ay website.
Dabaaldega Casino ayaa sidoo kale waxay ururisaa macluumaadka laga yaabo shakhsi-aqoonsashada sida Protocol Internet (IP) cinwaanada for qortey users iyo users ka tago comments on blogs coronationcasino.com / sites. Dabaaldega Casino kaliya shaaca qortey cinwaanada IP user iyo Commenter xaalad la mid ah in ay isticmaasho iyo macluumaadka shakhsi-aqoonsashada sida hoos ku qeexan, marka laga reebo in cinwaanada IP Commenter iyo cinwaanada email waa la arki karo iyo shaacin u maamulayaasha of blog / goobta halkaas oo comment waxaa ka dhintay.
Soo ururinta ee Shakhsi-Caddaynta Macluumaadka
Kooxda martida qaarkood inay websites dabaaldega Casino ee ay doortaan in ay la macaamilaan dabaaldega Casino siyaabo u baahan dabaaldega Casino in la soo ururiyo macluumaadka shaqsiga lagu aqoonsanayo-. Qadarka iyo nooca macluumaad in dabaaldega Casino ururiyaa ku xiran tahay nooca isdhexgalka. Tusaale ahaan, waxaan ku weydiin martida rukunta at coronationcasino.com si ay u bixiyaan cinwaanka username iyo email ah. Kuwa ku hawlan yihiin macaamil la dabaaldega Casino waxa laga codsanayaa inay bixiso macluumaad dheeraad ah, oo ay ku jiraan sida ay lagama maarmaanka macluumaadka shakhsiga ah iyo dhaqaale loo baahan yahay si loo farsameeyo xawaalad kuwa. In kiis kasta, Dabaaldega Casino ururiya macluumaad sida Skokkelund kaliya sida loo baahan yahay ama ku habboon si ay u gutaan ujeedada dhexgalka booqdaha ee la dabaaldega Casino. Dabaaldega Casino ma sheegno macluumaad shakhsi-aqoonsashada kale oo aan ahayn sida hoos ku qeexan. Oo martida mar walba diidi karaa in shaqsi ahaan bixiya macluumaadka-aqoonsashada, la digtoonyey in looga hortago laga yaabaa in ay ku biiraan hawlaha website-xiriira qaarkood.
Dabaaldega Casino ururiyaan laga yaabaa in tirakoob ku saabsan habdhaqanka of visitors in ay websites. Dabaaldega Casino muujiyaan laga yaabaa in macluumaadkan si cad ama u siiyaan kuwa kale. Si kastaba ha ahaatee, Dabaaldega Casino ma sheegno macluumaad shakhsi-aqoonsashada kale oo aan ahayn sida hoos ku qeexan.
Ilaalinta qaarkood Information Shaqsi-Aqoonsiga
Dabaaldega Casino sheegi kara shakhsi-garashada iyo macluumaadka shaqsiga-aqoonsado oo kaliya kuwa shaqaalaheeda, qandaraasleyaasha iyo ururada la jaalka ah in (i) baahan yihiin inay ogaadaan macluumaadka si ay u farsameeyo on dabaaldega Casino odhanayo ama si ay u bixiyaan adeegyada laga heli karaa website-dabaaldega Casino ee, iyo (ii) in ay ku heshiiyeen in aan ku ogeysiiyo dadka kale. Qaar ka mid ah shaqaalaha kuwa, qandaraaslayaasha iyo ururo gacan saar la ku yaal waxaa laga yaabaa in meel ka baxsan dalka gurigaaga; adigoo isticmaalaya websites dabaaldega Casino ee, aad u fasaxdo in wareejinta macluumaadka sida iyaga. Dabaaldega Casino kama dillaacdo doonaa ama iibin kara shakhsi-garashada iyo macluumaadka shaqsiga lagu aqoonsanayo-qof. Kale ee badan in ay shaqaalaheeda, qandaraaslayaasha iyo ururo gacan saar, sida kor lagu sharaxay, Dabaaldega Casino sheegi kara shakhsi-garashada iyo macluumaadka shaqsiga-aqoonsado oo kaliya jawaab maxkamadeed ah, amar maxkamadeed ama codsi kale ee dawliga ah, ama marka dabaaldega Casino ayaa aaminsan in iimaanka wanaagsan siidaynta in macquul ah lagama maarmaan si ay u ilaaliyaan hantida ama xuquuqda dabaaldega Casino, labada dhinac saddexaad ama dadweynaha ee waaweyn. Haddii aad tahay user diiwaangashan of website ah dabaaldega Casino oo bixisey cinwaanka emailkaaga, Dabaaldega Casino mararka qaarkood aad diri kartaa email ah in uu kuu sheego oo ku saabsan qaababka cusub, dalbi celintaada, ama aad sii taariikhda waxa ku dhacey la dabaaldega Casino iyo waxyaabaha our. Haddii aad noo soo diraan codsi (tusaale ahaan via email ama via mid ka mid ah hababka warcelin our), waxaan xaq u leedahay inay u wargeeyaan si ay nooga caawiyaan caddeeyo ama ka jawaabto codsigaaga ama si ay nooga caawiyaan taageero isticmaalayaasha kale leenahay. Dabaaldega Casino qaadataa dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si macquul ah si ay u difaacaan helitaanka aan la ogalayn, isticmaalka, Ebana ama burburinta kara shakhsi-garashada iyo macluumaadka shaqsiga lagu aqoonsanayo-.
cookie A waa string ah macluumaad ah dukaamada website on computer booqdaha ah, iyo in browser booqdaha ee bixisaa in website-ka mar walba oo ku soo laabtay booqdaha. Dabaaldega Casino isticmaalaa cookies si ay u caawiyaan dabaaldega Casino aqoonsado iyo raad martida, ay isticmaalka of website dabaaldega Casino, oo ay website helaan doorbidida. Dabaaldega Casino martida ah oo aan jeclaan lahaa in cookies kaalinta on kombiyuutarada waa in dhigay daalacashada ay leedahay inaad diido cookies hor inta aadan isticmaalin websites dabaaldega Casino ee, iyadoo khasaare ah in muuqaalada qaar ka mid ah website-yada dabaaldega Casino ayaa laga yaabaa in aan sii fiican u shaqeyo aan gargaarka ee cookies.
Haddii dabaaldega Casino, ama si xooga hantidoodii oo dhan, ayaa helay, ama ay dhacdo in lagama yaabo in dabaaldega Casino baxa ganacsiga ama galaa kicitaan, macluumaad user noqon lahaa mid ka mid ah hantidooda la wareejiyo ama helay by dhinac saddexaad. Waxaad qiraysaa in wareejinta sida dhici kara, iyo in acquirer mid ka mid ah dabaaldega Casino laga yaabaa in ay sii wadaan si ay u isticmaalaan macluumaadka shakhsiyeed sida ku xusan xeerkan.
Ads muuqday on mid ka mid ah website-yada our laga yaabaa in lagu gudbiyey in dadka isticmaala ay wada-hawlgalayaashu advertising, kuwaas oo laga yaabaa cookies. cookies waxay u saamixi server ad u ah in la aqoonsado your computer mar kasta oo ay kuu soo diri xayeesiin online inay isku ururiso macluumaadka adiga ama dadka kale ee ay isticmaalaan your computer ku saabsan. Macluumaad Tani waxay u ogolaaneysaa shabakadaha ad si, iyo waxyaabo kale, samatabbixin Xayeysiinta la doonayey in ay rumaysan yihiin noqon doonaa oo xiiso ugu inaad. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Tani waxay dabooshaa isticmaalka cookies by dabaaldega Casino oo ma dabooli isticmaalka cookies by xayeysiiya kasta.
Isbedelada Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Dabaaldega Casino aan xiriir la leh set gaar ah oo ciqaab. Ku raaxeyso at Casino dabaaldega ah!
randy.hallcasino dhibic @ aragti com